Saraakiil katirsan Melleteriga Turkiga ayaa wargeys maxalli ah u sheegay in heer gaba gaba ah uu marayo olole melleteri oo Turkigu ka fuliyo magaalooyin katirsan gobolka Xalab.
Jariiradda Yani Shafaq ee ku dhow xukuumadda ayaa faafisay warbixin sheegaysa in ladiyaariyay awood ciidan oo dhan 25-kun oo askari, ciidamada ayaa duullaan ballaaran ku qaadi doono magaalooyin ay kamid yihiin Cafriin,Ceynul Carab,Manbaj iyo Talal abyad oo dhammaantood ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta YPG.
Warbixinadu waxay sheegayaan in howlgalka "Gaashaanka Furtaat2" ay ka qeyb geli doonaan 17-kun oo dagaalyanno Suuriyaan ah kuwaas oo dowladda Turkiga ay dhaqaale iyo taageero melleteri siiso.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in haddii Turkigu uu ku dhiirado qaadidda weerarkan uu kala shaki soo kala dhax geli doono Washington iyo Ankara islamarkaana hakad uu ku imaan doono duullaanka maleeshiyaadka calmaaniyiinta Kurdiyiinta ay ku qaadeen magaalada Raqqa ee Suuriya.
Qarax 6 Askari Ku Dhinteen Oo Ka Dhacay Duleedka Deegaanka Dhanaane.